”’Horseedfc.net”’ Mourinho oo la ogaaday waxyaabaha oo Aduunka u nacbanyahay – Horseed Sports Club
Cayaaraha waqtiga fiidkii ah soo gala iyo kuwa ka danbeeya ma aha wax uu jecel yahay macallinka cusub ee Manchester United Jose Mourinho.
Siddeed bil oo uu moogaa kaddib Premier League ayuu mar kale kasoo muuqanayaa Mourinho oo hore looga eryay Chelsea, wuxuuse ninkan jecel yahay inuu si fiican u quraacdo, kaddibna isu diyaariyo cayaaraha goorta hore soo dhaca, waa kuwa horyaalkee.
“Haddii aad i weydiiso, waxaan jeclahay cayaaraha goorta hore la dheelo.” Special One ayaa sidaa war tebiyaasha u sheegay.
“Taas ayaan jeclahay. Waxaan jecleystaa inaan aroortii cuno quraac fiican – kaddib aado baska, sii aado cayaarta, dheelno kulanka, badinno haday macquul tahay, kaddib wax walba way isku dhamaadeen – sidaa ayaan jeclahay.
“Ma jecli inaan cayaaro sugo. Waqtigeygii Spain, mararka qaar waxaan lahaa cayaaro waqti danbe ah, sababo la xiriira cimilada awgood. ‘Waan necbahay sidan. Ma jecli maallintii oo dhan inaan kulan sugo.” ayuuna hadalkiisa sii raaciyay macallin Mourinho.
Jose Mourinho ayaana doorbidaya in cayaaraha uu hogaamin doono xagaagan soo aadan kooxda Manchester United la cayaaro waqti hore.